कसरी सही मोबाइल अनुप्रयोग विकास फर्म चयन गर्ने Martech Zone
एक दशक पहिले, सबैजना अनुकूलित वेबसाइटको साथ इन्टरनेटको आफ्नै सानो कुनामा राख्न चाहन्छन्। प्रयोगकर्ताहरूले इन्टरनेटको साथ कुराकानी गर्ने तरीका मोबाइल उपकरणहरूमा परिवर्तन हुँदैछ, र एक एप्लिकेसन धेरै ठाडो बजारहरूका लागि उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरू संलग्न गराउन, राजस्व बढाउन र ग्राहक अवधारणा सुधार गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण मार्ग हो।
A किन्वे रिपोर्ट CIOs र मोबाइल नेताहरूको एक सर्वेक्षणमा आधारित मोबाइल अनुप्रयोग विकास छ भनेर पत्ता लगायो महँगो, ढिलो र निराशाजनक। सर्वेक्षण गरिएको मोबाइल नेताहरूको% 56% ले एक app निर्माण गर्न months महिना देखि एक बर्ष भन्दा बढी लाग्छ भन्छ। १%% भन्छन् कि उनीहरू प्रति अनुप्रयोग $ २7०,००० को औसतमा प्रति अनुप्रयोग $००,००० देखि app १,००,००० भन्दा बढी खर्च गर्छन्।
सहि विकास फर्मले बनाउन वा एक अनुप्रयोगको सफलता तोड्न सक्छ, जो सही एक छान्ने प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउँछ। तपाईको सफ्टवेयर ईन्जिनियर हुनु हुँदैन शिक्षित निर्णय गर्नको लागि कुन विकास फर्मले तपाईको परियोजनालाई उत्तम सूट गर्दछ। यहाँ केहि राम्रा अभ्यासहरू छन् जुन तपाईंले विचार गर्नुपर्दछ जब तपाईं सम्भावित प्रदायकहरूसँग भेट गर्नुहुन्छ।
के तपाईंको फर्मले तपाईंलाई आवश्यक अनुसार वितरण गर्न सक्दछ?
एक सक्षम, अनुभवी फर्म एक महान पोर्टफोलियो छ। अझ राम्रो - उनीहरूसँग पोर्टफोलियो छ आइटमको साथ तपाईको आफ्नै अनुप्रयोग विचारसँग तपाईको समीक्षाको लागि राम्रो पोर्टफोलियो दिइएको छ, तर तपाईले फर्मको डिजाइन मापदण्डको लागि बलियो महसुस गर्नुहुनेछ यदि तपाईले खोज्नु भएको जस्तो वस्तुहरू हेर्न सक्षम हुनुभयो भने। उदाहरण को लागी, मानौं तपाई एक अनुप्रयोग चाहानुहुन्छ कि व्यापार महिला को लागी सबै भन्दा राम्रो जुत्ता फेला। फर्मले शपिंग वा ईकॉमर्समा केही सम्बन्धित अनुप्रयोगहरू प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनुपर्छ - जुत्ता शपिंगको साथ अनुभवको लागि बोनस पोइन्टहरू।
यो नबिर्सनुहोस् कि उनीहरूलाई प्लेटफर्मको लागि कोडनको पनि अनुभव चाहिन्छ जुन तपाइँ तपाइँको अनुप्रयोग सुरू गर्न प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। धेरै स्टार्टअपहरू एउटा प्लेटफर्ममा अनुप्रयोग सुरूवात गरेर सुरू हुन्छ र अर्कोमा विस्तार भए पछि तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि अनुप्रयोग अनुप्रयोग स्टोरमा एक विजेता हो। सुपरसेलबाट लोकप्रिय खेल क्लेश अफ क्लांस लिनुहोस् जुन 2.3 बर्षमा $ २.6 बिलियन भन्दा बढी उत्पन्न भएको छ। खेल सुरुमा एप्पल आईओएस को लागी शुरू भयो र त्यसपछि एन्ड्रोइडमा विस्तार भयो एक पटक खेल स्पष्ट सफलता थियो। यस प्रक्रियाले खेल सुरू गर्न आवश्यक समर्थन र ओभरहेडको मात्रालाई कम गर्‍यो, जसले गर्दा अनुप्रयोग विकासकर्ताहरू र सिर्जनाकर्ताहरूले बहुविध प्लेटफर्महरूमा टेक्निकल बगहरू र फिक्सहरू भन्दा यसका प्रयोगकर्ताहरूको सुधारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछन्।
धेरै जसो स्टार्टअपहरूमा उस्तै खेल योजना हुन्छ, र तपाईंको विकास फर्मको लक्ष्य प्लेटफर्ममा बलियो अनुभव हुनुपर्दछ। विकास फर्महरूमा सामान्यतया दुबै आईओएस र एन्ड्रोइड अनुभवको साथ टोली हुन्छन्, तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको टीम तपाईंको लक्ष्य प्लेटफर्ममा विज्ञहरू हुन्।
सहयोग र संचार सफलताको कुञ्जी हुन्
एक अनुप्रयोग निर्माताको रूपमा, तपाईं सम्पूर्ण अनुप्रयोग विकास प्रक्रियामा एक महत्वपूर्ण घटक हुनुहुन्छ। केही अनुप्रयोग सिर्जनाकर्ताहरू सोच्छन् कि उनीहरूले आफ्नो विचार विकास फर्मलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन्, हरेक हप्ता अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न सक्दछन् र बाँकी बिर्सिनेछन्। वास्तवमा, सिर्जनाकर्ताले ठीक फर्मसँग नजिकबाट सहकार्य गर्नुपर्दछ यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि दर्शन स्पष्ट रूपमा विकासकर्ताहरूमा अभिव्यक्त गरिएको छ।
हामी आफैंलाई हाम्रो ग्राहकहरूको पार्टनरको रूपमा सोच्दछौं, उनीहरूलाई मोबाइल अनुप्रयोग विकास अनुभव मार्फत मार्गनिर्देशन। यसको मतलब यो हो कि हामी सेट-यो-बिर्सने-यो पसल होईन, या त; हाम्रो ग्राहकहरू कार्यक्षमता बहस, स्केलि decisions निर्णयहरू, र अधिकमा सहभागी हुन समर्पित हुनुपर्दछ। हामी हाम्रो विशेषज्ञता ndण दिन्छौं, तर ग्राहक प्रत्येक तरिकामा संलग्न छ। यो समावेश सबैको लागि एक सही सहयोगी प्रक्रिया हो। किथ शिल्ड्स, सीईओ, डिजाइनली
प्रत्येक फर्मसँग एउटा अनुप्रयोग प्रोजेक्ट समाधान गर्ने आफ्नै तरिका हुन्छ, तर सबैभन्दा राम्रो व्यक्तिहरू सिर्जनाकर्तासँगै बस्छन्, उनीहरूको विचारलाई कागजमा हस्तान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ, र कुनै कोडिंग सुरु हुनुभन्दा अघि विस्तृत विवरणहरू कागजात दिन्छ। किनकि विकास टोली विचारमा पूर्ण रूपमा नयाँ छ, यो चरण बिल्कुल महत्वपूर्ण छ र दुबै पक्षका बीच राम्रो सहकार्यको आवश्यकता छ।
तपाईंको विकासकर्ताहरूले परियोजनाको डिजाईन र कोड दिनको लागि समय चाहिन्छ, तर टोलीसँग प्रोजेक्ट म्यानेजर उपलब्ध हुनुपर्छ कुरा गर्न को लागी तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन्।
तपाईंको विकास फर्मलाई एकको रूपमा सोच्नुहोस् साथी र टोलीको एक अंश हो जुन तपाईंको अनुप्रयोगको विचारलाई जीवन्त पार्दछ।
प्रयोगकर्ता अनुभव केवल ग्राफिक्स र लेआउट भन्दा बढि छ
वर्षौंसम्म, एक अनुप्रयोगको इन्टरफेस प्रयोगकर्ता अनुभव संग lumped थियो। यी दुई एक अर्काको प्रयोग गरीन्थ्यो, तर तिनीहरूलाई डिजाइनको अलग पक्षमा छुट्याउन र अध्ययनको नयाँ क्षेत्र सिर्जना गर्न आवश्यकता। नयाँ अनुप्रयोग सिर्जनाकर्ताहरूले प्राय: प्रयोगकर्ता अनुभव र प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस अलमलमा पार्छन्। प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस बटन, लेआउट र डिजाईन हो जुन तपाईंको प्रयोगकर्तासँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। प्रयोगकर्ता अनुभव प्रयोगको सजिलो र सहज र अन्तर्क्रियात्मक अन्तर्क्रिया हो कि यी घटकहरूले प्रस्ताव गर्दछ।
उदाहरण को लागी तपाइँसँग एक बटन हुन सक्छ जुन जानकारी सबमिट गर्दछ। बटन प्रयोगकर्ता इन्टरफेस को एक घटक हो। के प्रयोगकर्ताले पूर्ण रूपमा बुझ्दछ कि यो बटन जानकारी सबमिट गर्न प्रयोग गरिएको थियो र यो सजिलै पृष्ठमा फेला पार्न सकिन्छ? यो प्रयोगकर्ता अनुभवको एक अंश हो। प्रयोगकर्ता अनुभव प्रयोगकर्ताको सगाईको लागि प्यारामाउन्ट हो, जसले स्थापनाहरू र प्रयोगकर्ता अवधारणा चलाउँछ।
तपाईंको विकास फर्मको UI (प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस) र UX (प्रयोगकर्ता अनुभव) मा स्पष्ट फोकस हुनुपर्छ। तिनीहरूसँग सहज ज्ञान युक्त डिजाइनको स्पष्ट समझ हुनुपर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई एप्लिकेसन राम्रोसँग नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं सायद सोध्दै हुनुहुन्छ कि कसरी तपाईंलाई यस्तो चीज थाहा हुन्छ? तपाईंसँग फर्मको पोर्टफोलियो भएको कारण, तपाईं लक्षित गर्न चाहानु भएको प्लेटफर्ममा उनीहरूको अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गरेर उनीहरूका अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गरेर तपाईं कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड र आईओएससँग केहि सूक्ष्म डिजाइन बारीकाहरू छन्, र यी सूक्ष्मताहरू उत्सुक प्रयोगकर्ताहरूले बुझ्दछन्। अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्, यसको सुविधाहरू प्रयोग गर्नुहोस्, र मूल्याate्कन गर्नुहोस् यदि डिजाइन सहज ज्ञान युक्त छ र यसलाई नेभिगेट गर्न सजिलो बनाउँदछ।
डिप्लोइमेन्टको बेला के हुन्छ?
त्यहाँ फर्महरू छन् जुन स्रोत कोड हस्तान्तरण गर्दछ र यसलाई ग्राहकमा छोड्छ बाँकीलाई पत्ता लगाउन, तर यसले मात्र काम गर्छ यदि अनुप्रयोग सिर्जनाकर्ताको आन्तरिक, विकासकर्ताहरूको व्यक्तिगत टीम छ वा केही प्रकारको अनुप्रयोग अनुभव छ। एक उत्तम विकल्प एक फर्म हो जसले अनुप्रयोग कागजातहरू र डिजाईन गरेर एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि प्रक्रिया मार्फत तपाईंलाई कदम चाल्छ। ग्राहक एक्लो डिलिभरीको साथ काम गर्न एक्लैले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्दैन, र विकासकर्ताहरू प्रक्रियाको माध्यमबाट ग्राहकलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि त्यहाँ हुनुपर्दछ।
तपाईंसँग अन्तिम बैठक हुनेछ जहाँ तैयार उत्पाद प्रस्तुत गरिन्छ। एकचोटि तपाईंले साइन इन गर्नुभएपछि, विकासको वातावरणबाट उत्पादनमा अनुप्रयोग सार्न समय आयो। तपाईलाई प्रमुख अनुप्रयोग स्टोरहरूमा विकासकर्ता खाताहरू चाहिन्छ, तर एउटा राम्रो फर्मले चाललाई सहज पार्न मद्दत गर्दछ।
प्रत्येक अनुप्रयोग स्टोरको आफ्नै आवश्यकताहरू हुन्छन्, र सही विकास फर्मले यी आवश्यकताहरूलाई भित्रबाट जान्छ। तिनीहरूले सिर्जनाकर्तालाई अपलोडको लागि तयारी गर्न मद्दत गर्न सक्छन् जस्तै मार्केटिंग छविहरू तयार पार्दै, कुनै पनि एकीकृत गर्दै विश्लेषण कोड, र सही स्थानमा स्रोत कोड अपलोड गर्दै।
तपाईंले सही खोज्नु अघि तपाईंले धेरै अनुप्रयोग विकास फर्महरूसँग अन्तर्वार्ता लिनु पर्छ र भेट्नु आवश्यक पर्दछ। तपाईंले आफूले छनौट गर्नुभएको फर्मसँग सहज महसुस गर्नुपर्दछ र विश्वस्त हुनुपर्दछ कि उनीहरूले तपाईंको परियोजनालाई व्यावसायिकता र समर्पणका साथ व्यवहार गर्न सक्दछन्।
तपाई धेरै प्रश्न सोधेर यसो गर्नुहुन्छ - धेरै जसो तपाईको अनुप्रयोग र प्रक्रियाहरुको बारेमा चाहिने प्रोजेक्टको बारेमा तपाईलाई चाहिन्छ। तपाईं समीक्षा पनी हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तिनीहरूसँग कुनै छ भने। तपाईं स्थानीय जान सक्नुहुन्छ वा फर्म अनलाइन फेला पार्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईं चाहानुहुन्छ जब सम्म काम कुशलतापूर्वक चलाइन्छ र ग्राहकको लागि जति साना समस्याहरूको साथ प्रकाशित हुन्छ।
टैग: मोबाइल अनुप्रयोग विकासकर्तामोबाइल अनुप्रयोग विकास
एकल, पुष्टि, र डबल अप्ट-इन के हुन्?